ရပ်ဝန်းနှင့် ပိုးလမ်းမ စွမ်းအင်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေး တရုတ်နိုင်ငံ ဒုတိယဝန်ကြီးချုပ် အလေးထားပြောကြား - Xinhua News Agency
တရုတ်နိုင်ငံ ဒုတိယဝန်ကြီးချုပ် တရုတ်ကွန်မြူနစ်ပါတီ ဗဟိုကော်မတီ နိုင်ငံရေးဗျူရို၏ အမြဲတမ်းကော်မတီအဖွဲ့ဝင်လည်းဖြစ်သူ ဟန်ကျိန့် (Han Zheng) ဒုတိယအကြိမ်မြောက် ရပ်ဝန်းနှင့်ပိုးလမ်းမ စွမ်းအင်ဝန်ကြီးများ ညီလာခံသို့ ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာ ၁၈ ရက်တွင် တရုတ်နိုင်ငံ မြို့တော် ပေကျင်းမြို့၌ ဗွီဒီယိုမှတစ်ဆင့် တက်ရောက်၍ မိန့်ခွန်းပြောကြားနေသည်ကို တွေ့ရစဉ် (ဆင်ဟွာ)
တရုတ်နိုင်ငံ ဒုတိယဝန်ကြီးချုပ် ဟန်ကျိန့် (Han Zheng) က အောက်တိုဘာ ၁၈ ရက်တွင် ကျင်းပသည့် ဒုတိယအကြိမ်မြောက် ရပ်ဝန်းနှင့် ပိုးလမ်းမ ဝန်ကြီးများအဆင့် ညီလာခံသို့ ဗီဒီယိုလင့်ခ်မှတစ်ဆင့် တက်ရောက်ကာ ရပ်ဝန်းနှင့်ပိုးလမ်းမ စွမ်းအင်ကဏ္ဍ မိတ်ဖက်ဆက်ဆံရေး (BREP) အား အလေးအနက်ပြောကြားခဲ့သည်။
BREP ကို မြှင့်တင်ရေး ကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုများစွာနှင့်အတူ ရပ်ဝန်းနှင့်ပိုးလမ်းမစီမံကိန်း အောက်ရှိ စွမ်းအင်ကဏ္ဍ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုသည် ထူးခြားသောတိုးတက်မှုများရရှိခဲ့သည်ဟု ၎င်းကဆိုသည်။
ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုအကျပ်အတည်း၏နောက်ခံအကြောင်းရင်းအား ဆန့်ကျင်လျက် ရပ်ဝန်းနှင့် ပိုးလမ်းမ နိုင်ငံများရှိ စွမ်းအင်ကဏ္ဍသည် ထိရောက်၍ သန့်စင်သော အမျိုးမျိုးသော ပံ့ပိုးမှုမှတစ်ဆင့် ပိုမိုစိမ်းလန်းပြီး အားလုံးပါဝင်လာရမည်ဖြစ်ကြောင်း ၎င်းကဆိုသည်။
ကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုများအား အစိမ်းရောင်နှင့် ကာဗွန်လျှော့ချသည့် စွမ်းအင်အသွင်ပြောင်းရေးကို မြှင့်တင်ရန်နှင့် နျူကလီးယားလျှပ်စစ်၊ စွမ်းအင်သစ် ထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့် စမတ်စွမ်းအင်များဆိုင်ရာ ပိုမိုနက်ရှိုင်းရန် ဆောင်ရွက်သွားသင့်ကြောင်း ဟန်က ပြောကြားခဲ့သည်။
စွမ်းအင်နှင့် အရင်းအမြစ်များအပေါ် ကန့်သတ်ချက်များကို ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းရန် နည်းပညာဆန်းသစ်တီထွင်မှု၏ အရေးကြီးပုံကို ၎င်းက မီးမောင်းထိုးပြခဲ့သည်။
ဖွံ့ဖြိုးဆဲနိုင်ငံများအား ၎င်းတို့၏စွမ်းအင်ဖူလုံမှုပမာဏ တိုးတက်စေရန် အထောက်အကူပြုမည့် ပြန်ပြည့်မြဲစွမ်းအင်နှင့် စွမ်းအင်ရရှိမှုဆိုင်ရာ ပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကို ၎င်းက တိုက်တွန်းပြောကြားခဲ့သည်။
အားလုံးပါဝင်သောစွမ်းအင်ဖွံ့ဖြိုးရေးကိုမြှင့်တင်ရန်နှင့် ၎င်းတို့၏ ကိုယ်ပိုင်စွမ်းအင်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ဗျူဟာများကို ရွေးချယ်ရာတွင် မတူညီသောနိုင်ငံများ၏ အခွင့်အရေးများကို လေးစားရန် ပိုမိုလုပ်ဆောင်သွားသင့်ကြောင်း ၎င်းက ဆိုသည်။
၎င်းညီလာခံကို အမျိုးသားစွမ်းအင်စီမံခန့်ခွဲမှုဦးစီးဌာနနှင့် ဆန်းတုန်းပြည်နယ်အစိုးရတို့က ကျင်းပခဲ့ပြီး “ပိုမိုစိမ်းလန်းစိုပြည်၍ အားလုံးပါဝင်မှုရှိသော စွမ်းအင်အနာဂတ်ဆီသို့ လက်ချင်းယှဉ်တွဲစို့” ဟူသောဆောင်ပုဒ်ဖြင့်ကျင်းပခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။ (Xinhua)
BEIJING, Oct. 18 (Xinhua) — Chinese Vice Premier Han Zheng stressed the Belt and Road Energy Partnership (BREP) at the second Belt and Road Energy Ministerial Conference on Monday, which he attended via video link.
With much effort made to promote the BREP, energy cooperation under the Belt and Road Initiative has made remarkable progress, he said.
Against the backdrop of climate-change crisis, energy in the Belt and Road countries should become more green and inclusive through efficient, clean and diversified supply, he said.
Joint efforts should be made to promote green and low-carbon energy transformation and deepen cooperation on nuclear electricity, new-energy generation and smart energy, Han said.
He highlighted the importance of technological innovation to tackle the constraints on energy and resources.
He called for cooperation on sustainable energy and energy access to help developing countries improve their energy-security capacity.
More should be done to promote inclusive energy development and respect the rights of different countries to choose their own energy development strategies, he said.
The conference was held by the National Energy Administration and the Shandong provincial government, with the theme of “Join Hands towardsaGreener and More Inclusive Energy Future.” Enditem